CAQABADAHA SOMALILAND HOR YAALA (QABTA III). CADAWGA SOMALILAND IYO XEELADIHIISA | Gabiley News Online
CAQABADAHA SOMALILAND HOR YAALA (QABTA III). CADAWGA SOMALILAND IYO XEELADIHIISA
CAQABADAHA SOMALILAND HOR YAALA (QABTA III)
CADAWGA SOMALILAND IYO XEELADIHIISA
Dawlada Somalia waxay geed dheer iyo mid gaban u fuushay siday Somaliland u burburi lahayd. Lakiin, Ilaahay isaga ilaashanaya dadka xalaasha ah ee Somaliland. Dadka Somalia waxay aamin sanyihiin haddii Somaliland guulaysato in Somalia iyo fikrada Somaliwayn ayna jirahynin. Dawlada Somalia waxay dastuurkeeda ku qoratay in ay Somaliland tahay maamul gobaleed ay xukuman, calamkana sidaasi ayay ka dhaadhiciyeen. Marka, cadawga kowada ee ummada iyo dawlada Somaliland leedahay waa dawlada Somalia ee Xamar ka talisa.
Sida daraadeed, xukuumada cusub ee Somaliland waa in ay xakamayso isku socodka Somaliland iyo Somalia. Wadaniyiinta Somalia waa in dal-ku-gal (ama Fisa) lagu xidho, kuwa dagana waa in loo sameeyo Ciqaamada ay dalka ku joogan.
Muwadaniyiinta Somaliland ee Xamar tagaa waa in qoral ku soo gudbiyan waxay ka doonayaan, waa in ay laba mid uun u tagan, bayac mushtari iyo Shaqo. Markay soo noqdana waa in ay Somaliland Passport (Ama warqada aqoonsi muwadin Somaliland) ay ku soo galaan. Haddii laba mid aan ahay ay Xamar u tagan waa in Passportka laga qado. Loona ogalaan in ay mar danbe dalka ka doofaan.
Geed ayaa hadlay waxaanu yidhi “Gudin yahay imaad goyseen haddii aanad badhkay kugu jirin”, Xukuumada maqaar sarka ah ee Xamar ka talisaa waxba inagama qaadeen haddii ayna jirin kuwa inaga ah oo la shaqeeya, ama ay adeegsadan.
Marka Xukuumada Somaliland waa in ay sharci cad ka soo sarto muwadaniyiinta Somaliland ee ka midka ah Dawlada Somalia. Xeerkani oo dhigaya:
“Muwadainka Somaliland ee ka tirsan Xukumada Somalia, waa in lix bilooda gudahood uu Xukumada Somaliland cafis soo waydiistaan. Haddii kale ay lumin doono wadaniyada Somaliland.”
Qofkii la cafiyo waa in aanu siyaasada Somaliland laga mamnuuco inuu ka qayb qaato. Waa in aanu codayn karin. Waa in aanu olalaha doorsho ka qayb gali karin. Waa in aanu doorasho u istagi karin. Shaqaalo Dawlada Somaliland noqon karin.
Idaacada BBC iyo VOA
Labadani idacadood waxa maamula dad neceb Somaliland, waxaanay noqdeen idaacado dacayada (ama propaganda) fidiya. Waxay buun buuniya dawlada maqaar saarka ah ee Xamar. Qofka Somaliland ka soo jeeda ee Somaliwayna aaminsan way soo saran. Teeda kalana, wax kasta oo fiican oo Somaliland ka dhacana kama hadlan. Lakiin waxay soo bandhigan waxii xumaana ee Somaliland ka dhaca.
Waxaa la yidhi “afku wuxuu la xoog yahay magliga xowda kaa jara”
Haddaba, siddee ayaan u joojin karnaa labadan idaacadood ee cadaystay nacabka, iyo la dagaalanka jiritaanka Somaliland?
Marka hore, waa in aan inagu samaysano idaacado iyo TV-yo kor u qaada qadiyada Somaliland, si dadkeenu uga maarmaan in ay labadani Idacadood dhagaystaan. Teeda kale, waa in shacabka Somaliland la wacyi galiyo, loona sheego in ayna dhagaysan labada Idaacadood ee cadawga u ah jiritaanka Somaliland.
Marka xiga, waa in aan cabashooyin (ama grievance) u gudbino dadka maamula Idacadaha BBC World Service iyo VOA.
Haddaba, cabashada marka la samaynayo waa in “case” (ama kiis) dhistid. Dalalka Engiriiska iyo Maraykanku ee Idacadahani lehi, cabasho waxay dhagaystan marka aad “case” cad oo tageeraya cabashada u soo bandhigtid. Haddii kale, in aad shaqsi neceb tahay ayay u qadanayaa. Sida daradeed; Jamacadaha Somaliland ee lagu dhigo saxaafada (Journalist-ka) waa in ay sameeyan barnamij ardaydu ka baxaysa ay diyaariyaan, kaasi ooy baadhis (ama study) ku samaynaya barnamijyada ka baxa labadani Idacadood.
Tusaale ahaan, ardaydu waa in ay maalinkasta dhagaystan labada Idacadood, qiimeeyana mudo wakhtiyeedka (time period) ay warbaxintooda kaga hadlan deganada Somalida; sida dalka Djabouti, Kilinka 5, Somalia, Somaliland iyo NFD. Cida ay ku soo casuuman barnamajyada iyo dagaanka ay ka soo jeedaan, iyo waxa laga hadlayo barnamijyadooda. Jamacadahani waa in ay bil-kastana soo saaran wakhtiga ay idaacadahani ku soo qatan degaan kasta iyo dhacdooyinka ay ka hadlan. Iminka, labadani Idacadood waxay 90% buun buuniya dawlada maqaar saarka ah ee Somalia, waxaad u dhaqman sidii ooy u shaqeeyan wasaarada warfaafinta ee Somalia. Haddaba, inaga oo kaashanayna report-yadani waa in aynu cabasho u gudbino dadka maamula labadani Idacadood. Marka, cabashadeena way dhagaysan doona waxbayna ka qaban doonan ama labada FM ayaynu ka xidh doona.
BBC waxay caadaysatay in ay Somaliland ugu yeedho “Jamuuhriyada iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida”. Idacada BBC-du ee Somalidu shaqadeedu waa in ay sheegto wararka ka dhaca calamka, iyo kuwa ka dhac daganada afka Somaliga lagaga hadlo. Cidna uma diran madaxbanaanida Somaliland. Teeda kale, haddii ay danaynayaan in ay ogaadan in Somaliland tahay dal madaxbanaan waxaa ka heli karaan Museum-ka Ingiriiska. Haddaba, haddii Idacada BBC Somaligu joojin waydo hadalkani deel qaafka ah waa in aynu ka xidhno FM-ta Hargysa u taala. Idacad cadaysatay in ay qaranimada caydo ma ah in aad hawadaada u ogalaatid.
Internet-ka ama Social Media
Somaliland waa in ay kor u qaado wacyi galinta wadaninimada. Websityada Somaliland waa in ayna buun buuni waxa cadawga Somaliland ka farxinaya, mucaaridnimaduna wa in ay noqto mid caafimad qabtana, oo aan qaranka duminaynin.
Isticmaalka Social Media waa in aynu kor u qaadno, cadawga Somaliland ee meelaha ka caytamayan aanu u abuurno kuwa u jawaaba, oo afka ay fahmaya kula hadla.
Wada hadalka Somaliland iyo Somalia
Xukumada Somaliland oo kaliya ayaa fasax u haysata wada hadalka Somalia. Sida daradeed, ma ah in aynu is dhex yaacno.
Shirkii dhawan lagu qabtay Djabouti in dadka Somaliland ka qayb galan ma ahayn. Madaxwaynaha Jabouti haddii uu doonayo inuu hormood ka noqdo danta qoomiyada Somalida ee Geeska Afrika ku nool. Waxay ahayd inuu Dawlada Somalida ee uu shirarka u qabto, ka dhaadhiciyo in ay ixtiraaman go’aanka ummada Somaliland qaadatay, ooy aqoonsadan. Haddii kale uu u sheego inuu isagu aqoonsanayo Somaliland. Maalinta, uu taasi sameeyo ayaan u arkaa inuu wado danta ummada Somalida. Lakiin ma ah inuu inoola yimado ajando khiyaama ah oo Xamar lagu soo wal walaaqay.
Heritage Institute oo ah hay’ad laga leeyahay Somalia, ayaa ka hinastay xafladii xilwareejinta Madaxtooyada Somaliland eey iskugu yimadeen wafdiyo culus oo ka socda dalka Djabouti, Kilinka shanada, iyo NFD, tasi waxay Somalia ka dhigtay kuwa kaliya ee shanta Somaliyeed ee aan ka soo xadirin Xafladaasi. Taasina waxay ka dhigtay kuwa kaliya ee ka soo horjeeda horumarka iyo wada moolashaha qoomiyada Somalida. Marka, ayaa ku hindiseen shirkani ay ugu magac dareen shirka wada tashiga Somalida, madaxwaynaha DJabouti ula tageen.
Sida daradeed, waa in hay’ada iyo aqoon yahanada Somaliland ka qayb galin shir danbe oo loo qabto ummada Somalida, meesha doono ha lagu qabte; Djibouti ama Turki. Cida ogalaasho la’aan ku tagtana waa in khiyaamo qaran lagu qaado.
SOMALILAND HA NOOLATO!!!!!!!!!!!
OMAR ABDI YOUSUF OAKLAND, CALIFORNIA
DANTA QARANKA SOMALILAND AMA SOMALILAND-FIRST (SOMALILANDFIRST.COM).